राजावाद र बाहुनवाद
राजावाद र बाहुनवाद उस्तै उस्तै हो। राजावाद भनेको राजा को छोरो राजा हुने भनेको हो। बाहुनवाद भनेको बाहुन को छोरो पुजारी हुने भनेको हो।
राजावादी हुन राजा हुनु पर्दैन। कमल थापा राजा होइन। बाहुनवादी हुन बाहुन हुनु पर्दैन। जातपात मान्ने सबै बाहुनवादी।
राजावाद परास्त भएको हो कि बाहुनवाद विजयी भएको हो? देश गणतन्त्र मा गएको हो कि बाहुनवाद मा? बाहुनवाद ले राज सिंहासन बाहेक सब थोक खाएकै थियो। अब त्यो पनि खायो। मधेसी, जनजाति, महिला, दलित वाल्ल।
वेद लाई ढुंगा मानेर पुज्ने बाहुन त गनिनसक्नु छ तर वेद पढ़ने बाहुन कति छ? पढ़ने भनेको मोटरसाइकिल भट्याउने भनेको होइन, पढेको बुझ्ने भनेको हो।
वेद त हामी लाई खुद ब्रम्हा ले दिएको भन्छ तर त्यही ब्रम्हा को पहिलो अवतार जिजस लाई नेपाल मा पस्न दिएको छैन।
Jesus: Wisdom: Bramha
विष्णु को पहिलो अवतार राम। जानु अगाडि म फेरि आउछु भनेर गएका राम, कृष्ण को रुप मा आए। विष्णु का जम्मा दुई अवतार। ब्रम्हा को पहिलो अवतार जिजस। येशु। जानु अगाडि म फेरि आउछु भनेर गएका येशु।
जुन भारतवर्ष लाई ब्रम्हा ले वेद दिए त्यस भारतवर्ष मा आज येशु का लागि ठाउँ छैन।
God jesus christ Krishna Nepal Rama spiritual corruption Vishnu
सहमतिमा पुग्न सके अति उत्तम
मधेस, लोकमान र छठ
नेपाल प्रहरी को उपनिवेशी व्यवहार
सीमांकन का लागि जनमत संग्रह (2)
चीन, भारत, नेपाल र मधेस
सीमांकन का लागि जनमत संग्रह